Iyadoo maalintii labaad uu galay shirka Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa waxay isku afgarteen xilliga rasmiga ah ee ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka iyo weliba xiliga la dhaarinaayo xildhibaanada labada aqal.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in qodobo horudhac ah la isku afgartay, qaar kalena ay wax ka dhiman yihiin, iyadoo kuwa dhiman ay u badan yihiin cabashooyin ay Puntland tirsaneyso oo ugu horeyso tabashada xubnaha Aqalka sare ee Gobolada Waqooyi.
Madaxda Madasha iyo Wakiilada beesha caalamka ayaa isku raacay :-
1-In 15ka bishan la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka Somalia.
2-In 22-ka isla bishan la qabto doorashada guddoonka Baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa.
3-In doorashada ugu dambeysa ee Madaxweynaha Somalia la qabto 28-ka bishan.
Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay war murtiyeed ka soo saaraan shirkooda, iyadoo la sheegayo in qeyb ka mid ah War murtiyeedka uu diyaarsan yahay, ayna ka dhiman yihiin qodobo qaar oo aan wali la isku afgaran.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/war.jpg 152 272 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-08 23:42:052016-12-09 01:01:23
Dawladda Djibouti oo 6 Milyan oo lacagta Eruga ah ka Helaysa wadamada reer ... Madaxweynaha Soomaaliya oo haysta Pasport Shisheeye